Qubanaha » Gudoomiyasha Gobolka Banadir oo la badalaayo.
Gudoomiyasha Gobolka Banadir oo la badalaayo.
May 15, 2017 - jawaab
Waxaa lagu wadaa in todobaadkan gudihiisa is bedel lagu sameeyay qaar ka mid ah Guddoomiyeyaasha degmooyinka Gobolka Banaadir, iyadoo arrintan si aad ah looga hadal haayo Xarunta Aqalka dowladda Hoose.
Ilo ku dhow dhow xafiiska Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa u sheegay Jowhar.com in illaa berri lagu wado inay soo baxdo wareegtada xil ka qaadista iyo magacaabista 5-7 degmo oo lagu wado inay noqdaan degmooyinka ugu horeeyay ee ay saameeyaan is bedelada.
Wararka ayaa sheegaya in is bedelkan uu ku soo aaday, xilli Maamulka Gobolka Banaadir ku howlanaa isu diyaarinta Munaasabadda 15-ka May, balse ay dib uga dhacday munaasabadan darteed in goor hore la shaaciyo.
Dad badan oo xil doon ah ayaa hareeyay xarunta gobolka banaadir, waxaana dadka ay CV-gooda u gudbinayeen Xogheynta Gobolka, halka qaarkood laga dhageystay aragtidooda iyo qorshahooda hadii xilka loo magacaabo waxa ay qabanayaan.
Qaar ka mid ah Guddoomiyeyaasha degmooyinka oo u badan dhalinyaro jaamacado uga soo baxay dalka Suudaan ayaa qaba wal wal la xiriira in lagu soo wajahan yahay oo ay seefta xil ka qaadista dul-saaran tahay.
Wararka soo baxaya ayaa sheegaya in Guddoomiyeyaasha la magacaabi doono ay ku jiraan dhalinyaradii ka qeyb qaadatay ololihii doorashada Madaxweynaha iyo shaqsiyaad kale oo qurbo joog ah.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed ayaa tan iyo markii uu xilka la wareegay waday dar dar gelin maamulkiisa ah, iyadoo todobaadkii horena xil ka qaadis ku sameeyay 3 ka mid ah agaasimayaasha waaxyaha dowladda hoose.
Si kastaba ha ahaatee waxaa maalmaha soo socda isha lagu hayaa is bedelka ugu horeeyay ee ku dhici doona Guddoomiyeyaasha degmooyinka.